Blog - Torohevitra momba ny fisafidianana ny mpanonta mafana farany ho an'ny orinasanao
Torohevitra momba ny fomba fisafidianana ny mpanonta mafana farany ho an'ny orinasanao
Amin'izao fotoana izao, ny mpanonta mafana dia be mpampiasa kokoa, ary koa manana asa bebe kokoa. Ka iza amin'ireo mpanonta hafanana no mety aminao?
Betsaka ny karazana sy ny asan'ireo mpanonta printy eny an-tsena ho an'ny safidinao, ny sasany amin'ny tapakila fanontana, ny sasany ho an'ny pirinty fanontana, ary ny sasany ho an'ny fampiasana finday. Araka ny fepetra takiana samihafa, dia haneho karazana mpanonta mafana telo amin'ity lahatsoratra ity izahay.
>Fanontana mpanonta. Ankoatra ny hafa, ny maodely WP200 anay dia atolotra indrindra rehefa mila mampiasa azy amin'ny indostrian'ny fikarakarana sakafo ianao. Ary manana haingam-pirinty efatra izahay amin'ity karazana ity ho an'ny safidy, 200mm / s, 230mm / s, 260mm / s ary 300mm / s. Ankoatr'izay, Izy io koa dia manohana ny asan'ny filaharana sy ny fisorohana ny baiko tsy hita.
>Fanontana marika. Ny WP-300B no fiasan'ny mpanonta noho ny famolavolana maotera roa sosona. Ny hafainganam-pandeha avo indrindra dia 152mm / s. Izy io dia manana sensor maro, marika mainty, halaviran-toerana ary sensor misy banga. Ho fanampin'izany, izy io koa dia manohana ny mpihazona taratasy ivelany sy ny boaty misy ny marika, ka izany dia malaza be amin'ny fivarotana lehibe sy ny lozisialy.
> Ireo roa natolotra teo aloha dia mpanonta pirinty, ny etsy ambany dia a mpanonta findayWP-Q3A. Ity dia mpanonta tapakila & marika, miaraka amin'ny herijika angovo. Ary manohana ny fanontana logo NV sy fanontana kaody 1D & 2D marobe. Noho izany dia be mpampiasa amin'ny banky, hopitaly, loteria fanatanjahantena ary sehatra hafa izy io.
Ao amin'ny Winpal dia miasa isan'andro izahay hahafahana manavao sy manolotra ny vokatra tsara indrindra amin'ny mpanonta printy izay mahafeno tsara ny fepetra takian'ny mpanjifanay. Raha mila mahafantatra bebe kokoa momba izay rehetra azonay omena ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Printer misy Wifi, Printer finday, Fanontam-pirinty fandraisam-peo 80mm, Printer mpanovo, 80mm mpanonta fandraisana, Fanontam-pirinty Thermal,